Maraoka: Ny teny Anglisy ho Teny fampiasa faharoa · Global Voices teny Malagasy
Maraoka: Ny teny Anglisy ho Teny fampiasa faharoa
Voadika ny 26 Aogositra 2010 19:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, 日本語, македонски, 한국어, Ελληνικά, English
Ao anatin'ny resadresaka nifanaovana vao haingana niaraka tamin'ny African Writing Online, mamelabelatra mikasika ny fanabeazana ara-pampianarana azony i Laila Lalami, mpanoratra Maraokana – Amerikana. Notaizana tamin'ny fiteny Arabo Maraokana i Lalami, fa nanomboka tamin'ny fahatanoràna vao “namaky bokin-tantara Maraokana, nosoratana mpanoratra Maraokana, ary ahitana mpandray anjara Maraokana ao anatiny.” Ny tena anton'izany voalohany dia satria nianatra tany amin'ny sekoly Frantsay i Lalami fony kely. Hoy izy :
“Ny teny Frantsay no teny nahalalako voalohany ny haisoratra, nanomboka tamin'ireo boky fampihomehezana toy ny Tintin sy Asterix, ireo boky tantaran-jatovo toy ny an'i Alexandre Dumas, hatramin'ireo boky mahazatra toy ny an'i Victor Hugo.”
Na izany aza i Lalami dia namoaka ny bokin-tantarany voalohany, Secret Son, amin'ny teny Anglisy taorian'ny nahazoany ny diplaoma ambony Doctorat mikasika ny teny sy ny soratra tao amin'ny Anjerimanontolo any California Atsimo.
Saika efa mahazatra ny traikefan'i Lalami raha ho an'ny mpianatra any Maraoka. I Said Bellari, mpanoratra ho an'ny Moroccoboard.com, dia manolo-kevitra ny fanalàna tsikelikely ny fiankinan-doha amin'ny teny Frantsay, ary ny fampidirana ny teny Anglisy ho teny ofisialy faharoa ampiasaina any Maraoka. Ao amin'ny famelabelarana nataony, manolotra ny fomba fijery vaovao fantatra amin'ny hoe “fanalàna fahaizana mamaky teny sy manoratra” izy :
“Midika izany fa miteny tenim-pirenena diso ry zareo any Maraoka, amin'ny izy samy izy sy amin'izao tontolo izao. Noho izany dia tsy mahavita manaraka ny fanatontoloana isika ary misintaka tsikelikely amin'ny fitomboan'ny fivoarana any amin'ireo faritra hafa any ivelany toy ny any Azia Atsimo Atsinanana ohatra. Mba hazava tsara hatrany am-boalohany aloha: miaraka amin'ity fanamarihana ity, tsy miteny aho hoe tokony hijanona tsy hiteny Arabo intsony isika aty Maraoka. Allah yastar (Hitahy antsika anie Allah )! Tsy izany mihitsy, angamba aza tokony hanao izany misimisy kokoa isika. Mazava ho azy fa ny tiako hambara izany dia hoe tokony hikendry ny hampihena ny fampiasana ny teny Frantsay isika araka izay haingana indrindra.
Eo andanin'izany, tokony hanome tosika vaovao ny teny Anglisy isika eo amin'ny lafiny maro amin'ny fiaraha-monina Maraokana, ary hamela azy handray ny toerany amin'ny maha-teny fampiasa faharoa any Maraoka azy. Tsy tokony ho fiteny fampiasa faha-3 na faha-4 akory ny teny Frantsay amin'izany resaka izany. Hanomboka vanim-potoana faharoa amin'ny Istiqal ( fahaleovantena) ity fiovana amin'ny tany miteny frantsay ho amin'ny tany miteny ” Arabo-Anglisy” ity.”
Isan'ny fanalahidy iray eo amin'ny fananganana fiaraha-monina ny tenim-pirenena. Mifototra amin'ireo soatoavina iraisana ny fiforonan'ireo fiaraha-monina ary tanjona iray ny hamoronana làlana hifaneraseran'ny tsirairay mba hiroboroboana. Manoratra i Bellari fa fanimban-tena ho an'ny fiaraha-monina Maraokana ny manohy mitazona ny teny Frantsay ho fiteny fampiasa faharoa :
“Hanaiky mora foana izay Maraokana akademisiana, manam-pahaizana ara-tsiansa, mpandraharaha, mpanakanto, mpanoratra, dokotera, mpanao politika na izay rehetra manana anjara toerana ambony eo amin'ny fiaraha-monina, fa ny teny Frantsay no mbola Tompon'ny Tontolo Maraokana. Tao anatin'ny 50 taona mahery, mbola nahavita nampino ny Maraoka i Frantsa fa mbola mila mitazona ireo fatotra ara-tantara sy ara-kolotsaina aminy isika.”
Na dia efa 55 taona aza izay no nahazoan'i Maraoka ny fahaleovantenany, mbola hita taratra mazava foana ny herin'i Frantsa. Ny tenim-pirenena dia fitaovana hanondroana ny tena sy hanehoana ny mombamomba ny fiaraha-monina. Ny tenim-pirenena tsirairay dia samy manana ireo lantom-peony, ireo fihetsiny, ireo fanehoana fihetseham-po amin'ny endrika, ary ireo tsindrim-peony. Tonga miaraka amin'ny tantara mavesatra ihany koa izany. Hoy i Bellari amin'izany:
“Amim-pahatsiarovan-tena, nefa indrindra tsy amim-pieritreretana, ny teny Frantsay tahaka ny Lingua Franca any amin'ny fiaraha-monina maraokana dia mbola mampatsiahy antsika ny maha-andevo, mpiankin-doha, taraiky, tsy mahavita azy ary ny maha-antsika ireo zava-drehetra mampiavaka ny olona ambany kilasy, na raha atao fehezanteny tsotsotra kokoa dia hoe: ho olona arak'izay tian'ny mpanavakavaka hiheveranao ny tenanao, ho olona ambany kilasy: tsy dia manan-karena aho, tsy dia mahavita azy.”
Fanampin'ny maha-fanavahana ny mombamomba ny firenena iray, hanokatra varavarana maro vaovao eo amin'ny tontolon'ny siansa sy ny teknolojy ny fampitombona ny fampiasana ny teny Anglisy. Maneho ny tsy fisian'ny fandrosoana eo amin'ny tontolo ara-tsiansa ny mpitoraka bilaogy ao amin'ny Bla Francia, i Hicham. Toa tsy nahazoana vokatsoa firy ho an'i Maraoka ny fiankinan-doha tamin'ny teny Frantsay, indrindra tamin'ny fampianarana sy ny fikarohana ara-tsiansa . Mandahatra ireto antontan'isa manaraka ireto i Hicham :
- 50%-n'ireo mpianatra nisoratra anarana amin'ny taona voalohany eny amin'ny anjerimanontolo no nandao ny fianarany talohan'ny faran'ny telovolana voalohany, tsy nahazo diplaoma akory.
- 9.3 no salan'isan'ny taom-pianarana takiana hahazoana ny mari-pahaizana Master (efa-taona foana no mahazatra ),
- Latsaky ny 10%-n'ireo mpianatra nisoratra anarana no mahazo ny mari-pahaizana master ao anatin'ny efa-taona
Na dia antony mahatonga ny taham-pahafahana ho ambany aza ny sarany lafo, zava-misy mihitsy ny hoe :
Ny antsasany mahery amin'ireo mpianatra ao amin'ny taona voalohany ao amin'ny Fakiolten'ny Siansa no tsy mahatakatra ireo lesona siansa amin'ny teny Frantsay
Manjaka ny teny Frantsay any Maraoka, nefa tsy mahazo aina tsara akory ny ankamaroan'ireo mpianatra mampiasa azy mba handray anjara mavitrika amin'ny tontolo siantifika izay tena iasan'ny teny Frantsay. Mba hanatsarana ny zava-misy, manoro hevitra ny mpitoraka bilaogy, izay naka teny tao amin'ny taratasy nosoratan'i Khaled Sami momba ny filàna antontan-taratasy siantifika amin'ny aterineto amin'ny teny Arabo, hoe :
Ny fanavaozana ireo Fianarana fanomanana ny mari-pahaizana master dia manokana ny tapan-taona voalohany ho an'ny fianarana tenim-pirenena sy teknolojiam-pifandraisana, ka mazava ho azy izany any amin'ny Fakiolten'ny Siansa fa ny fianarana teny Frantsay.
Na izany aza, ity fitsipika ity, ny hasarotry ny fananganana ny fanatanterahana azy, dia lafo ny sarany, saro-takarina ny sisa tavela amin'ireo mpampianatra manana traikefa tsara, mba tsy hilazana ny zava-misy marina amin'ny fianarana ny tenim-pirenena ao anatin'ny efa-bolana.
Làlana iray hanatsorana ny toe-javatra ny fanomezana fampianarana lalina ny teny frantsay, nefa mandrisika i Hicham fa tokony hamela ireo mpianatra hizaha ny tontolo siantifika araka ny fomba fiteny ahazoany aina, ny Arabo izany, ireo anjerimanontolo. Tsy mampihena ny isa maron'ireo lahatsoratra siantifika sy ireo tatitra amin'ny teny Anglisy any amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny aterineto izany. Saika mifanerasera amin'ny teny Anglisy kokoa noho ny teny Arabo na ny teny Frantsay ireo sehatra fiadian-kevitra iraisam-pirenena, sy ireo fikambanana ao amin'ny tontolon'ny siansa.
Manohy milaza i Bellari ao amin'ny famelabelarany fa ny fanapariahana ny teny Anglisy ho teny fampiasa faharoa dia hitondra amin'ny :
“hetsi-bahoaka tena izy milaza momba ny fahefana mahefa, ny fijoroana amin'ny hevitra, ny fanehoan-kevitra ary fahatokisana vaovao, fanantenana sy finoana betsaka ho amin'ny ho avy. Izany no ezaky ny olon-drehetra amin'ny fitondrana ny Laraki-n'ny anjara Maraokana raha mampiato vetivety ny fijerena tsy an-kiato ao amin'ny fitaratra ary manomboka mijery kosa indray amin'ny alalan'ny varavarankely eo anoloana, ny amin'ny taona 2050 sy ny aoriany, ho amin'ny tombontsoa tokana ho an'ireo zanatsika sy zafikelintsika ”
Raha lasa tenim-pirenena faharoa any Maraoka ny teny Anglisy, maro ireo fotoana fanararaotana ara-toekarena sy sosialy no hipoitra ho azy ho an'ireo mponin'i Maraoka.